February 2022 - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNkk uDimpho Mpela nenye yefenisha ayikhiqizayo eHome and Décor Furniture yaseRoodepoort, eGauteng
UKUGCULISA amakhasimende akhe aze athembe umkhiqizo wakhe yiyona nto emthokozisa ukwedlula inzuzo ayenza ebhizinisini. Yingako ethanda ukuqala abheke ukuthi athandani ukuze aqinisekise ukuthi wenza ifenisha ezowagculisa.
Kumenyezelwe isikhwama esisha esiwuR20 billion sokutakula amabhizinisi amancane akhahlanyezwe yiCOVID-19
Bancoma imizamo emisha yokutakula amabhizinisi amancane akhahlanyezwe yiCOVID-19. USLINDILE KHANYILE uyabika
UHULUMENI wethule esinye isikhwama esizosetshenziswa ukulekelela amabhizinisi asafufusa ukuthi avuke azithathe ngemva kokukhahlanyezwa wukuqubuka kweCOVID-19.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNtokozo Thembani, intatheli, iphini lomhleli wezindaba kwiVuma FM noMC wemicimbi
Yebo, ngangiphiwa wumalume esikhathini esiningi.
ESabelwenimali sikaNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana kugqame ukuthi ufisa abantu baseNingizimu Afrika bakwazi ukuphefumula
UHULUMENI uzobhunga ngendlela okuklanywa ngayo inani likaphethroli ukubheka ukuthi ayikho yini indlela yokulibuyekeza. Loku ngeminye yemizamo ezokwenziwa ukuzama ukunciphisela abantu izindleko zempilo eziqonga mihla namalanga.
ISIYONKE imali yeSabelomali sango-2022/23 iwuR2.16 trilion kanti eminyakeni emithathu ezayo iwuR6.62trn.
UMnu uLungani Mthembu, umsunguli wePreme Adventures, yaseMpangeni, KwaZulu-Natali
UKHULE ewumuntu okhonze izinselelo ezintsha nongathandi ukwenza into eyodwa isikhathi eside. Loko kuholele ekutheni asheshe ashiye ukuba wuthisha. Uthe xinti kwezolimo. Nakhona akangahlala isikhathi eside njengoba esegxile ebhizinisini lendawo yokuvakasha nokungcebeleka.
Osomabhizinisi bazimisele ukweseka ezokushushisa, kuloba uBusi Mavuso
UKUSEBENZA kahle kwengalo yomthetho kubalulekile kwabaphethe amabhizinisi. Kunzima ukuphatha ibhizinisi ngaphandle kokusebenza kahle komthetho okuhambisana nophiko lokuphenya nokushushisa.
KULE ngosi ngithanda sikhulume ngendaba esengake ngayibeka kulezi zithebe ngokubaluleka kokuqinisa izinhlaka zebhizinisi lakho ukuze lingazitholi selifadalala eminyakeni ezayo, loku phecelezi okuthiwa future-proof your business.
UMnu uSiyanda Nondwayi ungomunye wabaphathi beStarbucks eNingizimu Afrika
Isithombe: wuLanga Khanyile
Owangena embonini yokuphatha izindawo zokudla zekhethelo engaqondile usewuqweqwe njengoba manje ephethe eyomhlaba jikelele. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
WANGENA embonini yezokudla neziphuzo eyitoho ngoba enzela ukuthuthukisa ulwazi lwakhe ukuze angagcini ngayeluthola esikoleni, lapho ayeqeqeshelwa khona umkhakha wokudayisa nokukhangisa, kanti akabuzanga elangeni ukuthi uzogajwa wuthando lwale mboni. Wagcina ehlala unomphelo kuyo.
UNkk u-Aseza Mphindwa-Mbaswana, umnikazi weFlight Inn B&B yaseMargate, KwaZulu-Natali
Unabele kweminye imisebenzi ngoba ebambe ngamazinyo ibhizinisi lendawo yokulala ukuthi lingawi. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UKUBHEDUKA kwegciwane iCOVID-19 ezweni kugcine kuphoqa uhulumeni ukuthi avale izwe ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwalo. Loko kube nomphumela omubi kosomabhizinisi, ikakhulukazi abasafufusa, abagcine bephoqeka ukuvala amabhizinisi abo kungasebenzeki.
UNksz uNonkululeko Zwane, umnikazi weThingo Eats and Catering, yaseNewcastle, KwaZulu-Natali, ayiqale ngesibonelelo sikaR350
Bawezwe ngelibanzi yisibonelelo sabangasebenzi asebenamabhizinisi athi bona. Baxoxe noTEBOGO MOKWENA
UKUQALWA kwesibonelelo sabangasebenzi sikaR350 wuhulumeni ngo-2020 kube wusizo kakhulu kubantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi intsha engasebenzi. Abanye babantu basebenzise le mali ukusungula amabhizinisi.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noNkosikhona Dube, umlingisi wemidlalo yeshashalazi neyethelevishini. Useke walingisa emidlalweni esingabala kuyona iWoza Albert, i-Freedom, i-Crown Warriors ne-Generations: The Legacy
Ngisemncane imali ngangingavele ngiyiphiwe nje, ngangiyisebenzela noma ngithunywe ukwenza into ethile kuqala (ngaphambi kokuthi) nginikwe encane.
USolwazi uBonke Dumisa uthi impela akusiwo umsebenzi kahulumeni ukusungula imisebenzi
Ingqapheli yomnotho ithi uyihlabe esikhonkosini uRamaphosa ngolwemisebenzi. USLINDILE KHANYILE uyabika
KUFANELE abantu bakwamukele ukuthi akuwona umsebenzi kahulumeni ukusungula imisebenzi ngoba leyo yinto okufanele kube yimboni ezimele eseqhulwini layo.
UMnu uDumisani Mngadi, imenenja yeSABS SMME ichaza ubumqoka bokulandela imidanti yalolu phiko
Abasafufusa abasukumele imicikilisho yeSABS ukuze bezokhula. UTEBOGO MOKWENA uyabika
KUNINGI okungatholwa wosomabhizinisi abasafufusa ophikweni olwengamele ukuhlola nokuqinisekisa imikhiqizo iSouth African Bureau of Standards (iSABS). Kepha wonke usomabhizinisi ofisa ukuhlomula kulolu phiko kudingeka abe namakhasimende amaningi ebhizinisini lakhe.
Akukuningi okuvuselela ithemba ngenkulumo kamengameli, kuloba uBusi Mavuso
NGABE iNkulumo eBhekiswe esiZweni ethulwe wumengameli yinto okufanele izinhlangano zosomabhizinisi ziyinake ngempela yini? Lona wumbuzo engiloku ngizibuza wona.
Akukho okuhlabe umxhwele ngenkulumo kaRamaphosa, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngifisa sibheke inkulumo kaMengameli uCyril Ramaphosa yangesonto elidlule. Cha, angiqonde kuhlaziya inkulumo yakhe ngokuphelele kodwa ngithanda sigxile isigatshana akhulume kuso ngezinto athe uhulumeni uzozishintsha uma kuziwa kwezosomabhizinisi abasebancane, iningi labo okungabantu abamnyama.
UMnu uMabhoko Mabotja weMabhoko’s Farm yasePolokwane, eLimpopo
Usizwe yisibindi owashiya umsebenzi wayolima. Namhlanje izinto ziyamchuma kwezolimo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UMLIMI waseGa-Mashashane, ePolokwane, eLimpopo, uchaze ezolimo njengomkhakha odinga ukubekezela nokusebenza kanzima ngaso sonke isikhathi ukuze uchume kuwo, umlimi ongene kule mboni ekhuthazwa wumngani wakhe wasekolishi.
UMnu uMpumelelo Zikalala ubheka umbango ophakathi kweVodacom noMnu uNkosana Makate
UNkk uThandeka Mngomezulu, umsunguli nesikhulu esiphezulu seTotalserve
Ukhuthaza abantu ukuthi babheke amathuba ebhizinisi kwabakuzwa ngaphakathi bese bebanogadingozi. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE
UNEMINYAKA ewu-13 esungule ibhizinisi emkhakheni awuthandayo wokuhlela nokucwaninga amabhuku kanti lichumile njengoba namanje esayibambile.
UNksz u-Andiswa Mchunu, umsunguli weMaua Mazuri Luxury Flowers yaseSikhawini, KwaZulu-Natali
Ukushaya indiva abebemngabaza eqala ukudayisa izimbali elokishini kuthela izithelo kosedlondlobala kuleli bhizinisi. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
ABANINGI bamhleka usulu eqala ibhizinisi lokudayisa izimbali elokishini ngoba kuyibhizinisini okukhonya ezinye izinhlanga kulona. Abanye babeya ubusha bakhe, bebodwa ababemngabaza ngoba enza into angayifundele.
UMnu uMduduzi Bhila, umsunguli we-Essential Holdings and Interior yaseNelspruit, eMpumalanga
Uyadlondlobala ekubazeni ifenisha ongene kulo mkhakha ngoba ethi ubamba itoho. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UKUMA noma sekunzima nokungavumeli izinkinga abhekane nazo ebhizinisini eminyakeni edlule zimphazamise kumqinise ukhakhayi, kwenza wafana nenqama ebuya namandla ukukhulisa ibhizinisi lakhe lefenisha.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noScelo ‘uCelow’ Mpungose, imbongi yezinkondlo zesiZulu
UMnu uMfanafuthi Mkhwanazi, umnikazi weMakgoeng Eatery, ayisungule nesithandwa sakhe uNksz uShabela Makhaphela, yaseTembisa, eGauteng
Ukuphelelwa wumsebenzi ngemva kokudilizwa nokungawutholi omunye kumphoqe ukufeza iphupho elidala lokuzisebenza ngomuso. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
UKUWA kwenye wukuvuka kwenye. Kube njalo nasensizweni yaseTembisa, eGauteng, okuthe ngokudilizwa emsebenzini ngenxa yokubheduka kweCOVID-19, kwavuleka ithuba lokuzisebenza ukuxosha ikati eziko. Idilizwe nje, ibisineminyaka emine isebenza kule nkampani.
Zicwaselwani izinkampani uma kuxegiswa imithetho yeCOVID-19?, kuloba uBusi Mavuso
NGESONTO eledlule kwenziwe izinguquko ezinqala emithethweni eminingi ebisanqinda abantu ezweni ngenxa yeCOVID-19 ngaphandle kowodwa – lona othinta ukusebenza kwabantu.
Kunzima ukuzimela kodwa yikhona okuqinisa ukhakhayi, kuloba uNtokozo Biyela
SAWUBONA mfundi wale ngosi. Namhlanje ngithanda sibheke indaba yokushiya emsebenzini ukhethe ukuzisebenza. Sekukaningi sibona abantu abashiya emisebenzini ngenxa yezimo ezithile bancamele ukuyozisebenza.
UMnu u-Alwin Makhale, umsunguli we-AA Moringa yaseThohoyandou, eLimpopo
Wadela umsebenzi emayini enkulu ngoba esabela kubizo lokuba wumlimi owenza ezibukwayo ngesitshalo sezimanga. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
UKHOLWA wukuthi ukulima umhlabathi kuwubizo kuyena njengoba ethi ukungena kwezolimo sekumfundise okuningi abengeke akwazi ukube akashiyanga emsebenzini ayewenza e-Anglo American.
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza umthetho olawula abadayisa izindlu
UNksz uZanele Sithenjwa, omunye wabasunguli be-The Rib Plug yaseSoweto, eGauteng
Ukuziphantela ukuze bandise emalini abayithola kumqashi kuholele ekuvuthweni kwebhizinisi lenyama enomkhuba phakathi lezintokazi zaselokishini. Omunye wazo uxoxe noTEBOGO MOKWENA
ZININGI izifundo ongazifunda emakhasimendeni akho ngomkhiqizo wakho futhi loko ngenye yezinto ongazisebenzisa ukukhulisa ibhizinisi lakho ulenze libe ngcono kunoliqale liyikona.
UMnu uMartin Vilakazi, umsunguli weRadio 101 eGoli, eGauteng
Ugila izimanga ekuphatheni nasekuthuthukiseni imisakazo owagajwa wuthando lewayilense ngenxa yokulalela ‘is’tori’ noninakhulu. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE ngohambo lwakhe
NJENGASEMIZINI eminingi ngaleso sikhathi, ukhule kubo kulalelwa imidlalo yomoya emsakazweni uRadio Zulu, osubizwa ngoKhozi FM. Kuthe eseqeqeshelwa umsebenzi ekolishi wejwayela iMetro FM ayeyilalela imini nobusuku njengoba wayengawuvali umsakazo nasebusuku.
UMnu uTshepo Sethosa, umsunguli weLast Number, amahewu ekhethelo aseGoli, eGauteng
Owayengusomahlaya usekitaza abantu ngamahewu ahlabahlosile. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
OWAYEWUSOMAHLAYA ujatshuliswa wukubona amahewu akhe ethandwa ngabantu abaningi yize enesikhashana ewaqalile. Namanje akakholwa uma ebona indlela athengwa ngayo ezitolo aze libhincisele nxanye awezinkampani ezaziwayo.
Kuleli sonto kuSAZIWAYO NEMALI sixoxa noYezulu Dube, umsakazi we-Inanda FM, owethula i-World Music Show
Yebo, ngangiphiwa; noma kwakungenzeki njalo.
UNksz uSibusisiwe Kraai, umsunguli wePlatinum Glow Beauty Salon yaseMgungundlovu, KwaZulu-Natali
Okhule ehlale egundile usewumsamariya wabanezinkinga ezihlukene zezinwele. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
INTOKAZI yaseMgungundlovu, Kwazulu-Natali, ikhule inenkinga yezinwele eziqinile nezilukeka kanzima. Loku bekwenza ithwale kanzima uma iluka, kangangokuthi ibiphoqeleka ukuhlala egundile ngenxa yokungabatholi abenza ikhanda abakwazi ukwenza uhlobo lwezinwele zakhe.
UNksz uXoliswa Chewuka, umsunguli weXoliswa Carports & Awnings yaseThekwini, KwaZulu-Natali
Onebhizinisi elingandile kwabamnyama nelinamakhasimende emadolobheni ufisa ukungenisa emakhaya manje. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
ISIKHATHI esiningi uqashwa ngabantu basemalokishini, basemadolobheni nabahlala ezindaweni zabadla izambane likapondo owenza imipheme yezimoto, phecelezi ama-carport. Aseyindlala amakhasimende awathola ezindaweni zasemakhaya yize eseke waqashwa eNquthu, Empangeni naKwaNongoma.
Sidinga ukufakelwa izibuko isiphakamiso selekgotla ye-ANC ngemisebenzi, kuloba uBusi Mavuso
KUFANELE sizibuze ukuthi kungani amabhizinisi engatshali, engakhuli futhi engaqashi abanye abantu? Ngiyavumelana nezixazululo eziqhamuke nelekgotla ye-ANC ngesonto elidlule yize kodwa ngikhathazekile.
Kuhle ukwanda kosomabhizinisi kwipolitiki, kuloba uNtokozo Biyela
NAMHLANJE ngithanda sibheke umkhuba omuhle esiwubona uvama kwipolitiki – ukwanda kosomabhizinisi abangena kulo mkhakha.
UMnu uSifiso Tshonaphi, umsunguli we-Intalo Yethu yaseRustenburg, eNorth West
Kutholakala yonke into edingwa wumlimi esitolo soshiye inkampani enkulu wayoqala ibhizini lakhe lezolimo. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA
USEBENZE iminyaka eminingi enkampanini enkulu yenyama yenkukhu iRainbow Chicken. Ulwazi namava akuzuze kuyona kumsize kakhulu eseqala ibhizinisi lokufuya futhi adayise inyama yenkukhu.
UMpumelelo Zikalala ubheka umThetho oVikela abaThengi